Mgbe oge Mosis ga-anwụ ruwere (1-8)
Mgbe a ga na-agụrụ ndị Izrel Iwu ahụ (9-13)
E mere Joshụa onye ndú (14, 15)
E buru amụma na ndị Izrel ga-enupụ isi (16-30)
Abụ a ga-akụziri ndị Izrel (19, 22, 30)
31 Mosis wee gaa gwa ndị Izrel niile okwu ndị a, 2 sị ha: “Adị m otu narị afọ na iri abụọ (120) taa.+ A gaghịzi ekwe ka m na-edu unu,* n’ihi na Jehova agwala m, sị, ‘Ị gaghị agafe Osimiri Jọdan a.’+ 3 Ọ bụ Jehova bụ́ Chineke unu ga-ebutere unu ụzọ. Ọ ga-ebibi mba ndị a n’ihu unu, unu ga-achụpụkwa ha.+ Ọ bụ Joshụa ga-edu unu agafe,+ otú Jehova kwuru. 4 Jehova ga-eme ha ihe o mere Saịhọn+ na Ọg,+ bụ́ ndị eze ndị Amọraịt, nakwa ihe o mere ala ha, mgbe ọ lara ha n’iyi.+ 5 Jehova ga-emeriri unu ha, unu ga-emekwa ha ihe niile m nyere unu n’iwu.+ 6 Nweenụ obi ike, dịkwanụ ike.+ Unu atụla ha egwu, unu atụkwala ha ụjọ,+ n’ihi na ọ bụ Jehova bụ́ Chineke unu so unu na-aga. Ọ gaghị ahapụ unu, ọ gaghịkwa agbakụta unu azụ.”+ 7 Mosis wee kpọọ Joshụa ma gwa ya n’ihu ndị Izrel niile, sị: “Nwee obi ike, dịkwa ike,+ n’ihi na ọ bụ gị ga-akpọba ndị a n’ala ahụ Jehova ṅụụrụ ndị nna nna ha iyi na ọ ga-enye ha. Ọ bụkwa gị ga-enye ha ya ka ọ bụrụ ala ha ketara.+ 8 Ọ bụ Jehova na-ebutere gị ụzọ, ọ ga-anọnyekwara gị.+ Ọ gaghị ahapụ gị, ọ gaghịkwa agbakụta gị azụ. Atụla egwu, atụkwala ụjọ.”+ 9 Mosis wee dee Iwu a+ n’akwụkwọ ma nye ya ndị nchụàjà bụ́ ndị Livaị, ndị na-ebu igbe ọgbụgba ndụ Jehova, nyekwa ya ndị okenye niile e nwere n’Izrel. 10 Mosis nyere ha iwu, sị: “Ná ngwụcha afọ asaa ọ bụla, n’oge a kara aka n’afọ unu ji akagbu ụgwọ e ji unu,+ n’oge Ememme Ụlọ Ndò,+ 11 mgbe ndị Izrel niile na-abịa n’ihu Jehova+ bụ́ Chineke unu n’ebe ọ ga-ahọrọ, unu ga-agụrụ ndị Izrel niile Iwu a ka ha nụ.+ 12 Kpọkọtanụ ndị Izrel,+ ụmụ nwoke, ụmụ nwaanyị, ụmụntakịrị, na onye mbịarambịa nke bi n’obodo unu, ka ha gee ntị ma mụta banyere Jehova bụ́ Chineke unu, ka ha tụọ egwu ya ma lezie anya na-eme ihe niile e kwuru n’Iwu a. 13 Ụmụ ha ndị na-amabeghị Iwu a ga-ege ntị+ ma mụta ịtụ egwu Jehova bụ́ Chineke unu n’oge niile unu na-adị ndụ n’ala ahụ unu na-agafe Osimiri Jọdan ka unu weghara.”+ 14 Jehova gwaziri Mosis, sị: “Lee, oge ị ga-anwụ adịla nso.+ Kpọọ Joshụa, gaakwanụ guzo n’ụlọikwuu nzute, ka m mee ya onye ndú.”+ Mosis na Joshụa wee gaa guzoro n’ụlọikwuu nzute. 15 Jehova wee pụta n’ụlọikwuu ahụ n’ogidi ígwé ojii. Ogidi ígwé ojii ahụ wee kwụrụ n’akụkụ ọnụ ụzọ ụlọikwuu ahụ.+ 16 Jehova gwara Mosis, sị: “Lee, oge ị ga-anwụ* eruwela. Ndị a ga-amalitekwa ịkpa àgwà ka ndị akwụna hapụ m gaa fee chi ndị mba ọzọ gbara ha gburugburu n’ala ahụ ha na-aga.+ Ha ga-ahapụ m+ ma mebie ndụ mụ na ha gbara.+ 17 N’oge ahụ, m ga-ewesa ha ezigbo iwe,+ m ga-ahapụkwa ha.+ Agaghịkwa m enyere ha aka*+ ruo mgbe e bibiri ha. Mgbe ọtụtụ nsogbu bịachaara ha, ha ataakwa nnukwu ahụhụ,+ ha ga-asị, ‘Ọ̀ bụ na ọ bụghị maka na Chineke anyị anọnyereghị anyị mere nsogbu ndị a ji bịara anyị?’+ 18 Ma, agaghị m enyere ha aka n’ụbọchị ahụ n’ihi ihe ọjọọ niile ha mere wee fee chi ọzọ dị iche iche.+ 19 “Ugbu a, deerenụ onwe unu abụ a+ n’akwụkwọ, kụziekwara ya ndị Izrel.+ Meenụ ka ha mụta ya,* ka abụ a wee na-echetara ndị Izrel ihe ga-eme ma ha nupụrụ Chineke isi.+ 20 Mgbe m ga-eduba ha n’ala ahụ m ṅụụrụ ndị nna nna ha iyi banyere ya,+ ala mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru na ya,*+ ha ewee rijuo afọ, ihe agaziwekwara ha,*+ ha ga-agakwuru chi ọzọ dị iche iche, fee ha ofufe ma leda m anya, mebiekwa ndụ mụ na ha gbara.+ 21 Mgbe ọtụtụ nsogbu ga-abịara ha, ha ataakwa nnukwu ahụhụ,+ abụ a ga-echetara ha ihe ndị m gwara ha ga-eme ha (n’ihi na ụmụ ha ekwesịghị ichefu ya), n’ihi na ama m ihe dị ha n’obi+ tupu mụ akpọba ha n’ala ahụ m ṅụrụ iyi na m ga-enye ha.” 22 Mosis wee dee abụ a n’akwụkwọ n’ụbọchị ahụ ma kụziere ya ndị Izrel. 23 O* meziri Joshụa nwa Nọn onye ndú,+ wee sị ya: “Nwee obi ike, dịkwa ike,+ n’ihi na ọ bụ gị ga-akpọba ndị Izrel n’ala ahụ m ṅụụrụ ha iyi na m ga-enye ha,+ m ga-anọnyekwara gị.” 24 Ozugbo Mosis dechara ihe niile dị n’Iwu a n’akwụkwọ,+ 25 Mosis nyere ndị Livaị, bụ́ ndị na-ebu igbe ọgbụgba ndụ Jehova, iwu, sị: 26 “Werenụ akwụkwọ Iwu a+ dowe n’akụkụ igbe+ ọgbụgba ndụ Jehova bụ́ Chineke unu. Ọ ga-abụ ihe akaebe a ga-eji ekpe unu ikpe. 27 N’ihi na ama m nke ọma na unu bụ ndị nnupụisi+ na ndị isi ike.+ Ọ bụrụ na unu na-enupụrụ Jehova isi otú a mgbe m ka nọ ndụ, unu ga-aka enupụ isi ma m nwụọ. 28 Kpọkọtaranụ m ndị okenye niile e nwere n’ebo unu dị iche iche na ndị isi unu, ka m kwuo ihe ndị a ná ntị ha, ka eluigwe na ụwa bụụrụ m ndị akaebe.+ 29 N’ihi na ama m nke ọma na m nwụọ, unu ga-akpa àgwà ọjọọ+ ma ghara idebe iwu ndị m na-enye unu. Nsogbu ga-abịakwara unu+ ná ngwụcha ụbọchị ndị ahụ, n’ihi na unu ga-eme ihe dị njọ n’anya Jehova, jirikwa ihe ndị unu ga-eme kpasuo ya iwe.” 30 Mosis wee gụọrọ ọgbakọ Izrel niile okwu ndị dị n’abụ a, malite n’isi ruo n’ebe ọ gwụrụ, sị:+
^ Na Hibru, “m na-apụ apụ ma na-abata abata.”
^ Na Hibru, “oge ị ga-esoro nna gị hà dinara.”
^ Na Hibru, “Tinyenụ ya n’ọnụ ha.”
^ Na Hibru, “ha amaakwa abụba.”
^ Ọ ga-abụ Chineke.